भाग्यमानी छोरो – Part 86 | ठूलाबा र ठूलीआमा 1 - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 86 | ठूलाबा र ठूलीआमा 1
बिहानखेर ठूलाबा बिउँझनासाथ ठूलीआमाको चाकको दरारमा लाँडो टाँसेर ठूलीआमालाई अँगालेर च्याप्प बुब्स समाएर निचोर्दै ठूलीआमालाई सन्काउन थाल्नुभयो । उसै त ठूलीआमाको पनि निद्रा पातलिईसकेको थियो र ठूलाबाको खेलाईले गर्दा ठूलीआमा उत्तेजनामा आइसक्नुभएको थियो । जब ठूलाबाले ठूलीआमाको तिघ्रा हल्का उचालेर पछाडीपट्टीबाट पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गर्नुभयो ठूलीआमाले पनि ठूलाबालाई हल्का हल्का चाक पछाडीतिर धकेल्दै साथ दिन थाल्नुभयो । केहिबेरमै ठूलाबाले ठूलीआमाको दुवै टाङ्ग आफ्नो काँधमा टेकाएर माथिबाट चिक्न थाल्नुभयो र ठूलीआमाको आँखा खुल्ला रहेको ढोकामा पर्*यो । ठूलीआमाले ठूलाबालाई प्रतिकार गर्दै भन्नुभयो “ए बुढा ! ढोका त खुल्लै छ साधना उठ्ने बेला भयो देख्ली र बर्बाद होला नि ? बन्द गरेर आउनुस् !” ठूलाबाले ठूलीआमालाई उक्साउँदै भन्नुभयो “ह्या छोड्दे जाँठी ! हुर्केकी छोरीले आफैं सोचबिचार गरिहाल्छे नि बाउ-आमाको कोठामा चियाउँदै हिंड्ली र ? देखिहालिछे भनेपनि केहि फरक पर्दैन बजारमा कस-कसलाई पुती चखाउँदै हिँडेकी होली !” “छ्या के साह्रो मात्तेका यी बुढा… ! अलिकति लाज पनि त मान्नु !” “तैले देखिनस् हिजो कस्ता छोटा छोटा टाईट कपडा लगाएर बसेकी थिई त्यो… मिल्ने भए मै चिक्दिन्थें जाँठीलाई !” “छ्या पात्तेका बुढो ! आफ्नै छोरीको बारेमा के के सम्म सोच्न सकेको ? अब आजकालका तरुनीले फेसनेवल कपडा त लगाइहाल्छन् नि ?” “के सोच्या छु र ? फेसनेवल कपडा लगाकोमा मैले केहि भनेकै छैन नि साधनाले त ब्रा-पेन्टी पनि नलगाई बसेकी थिई त ? जाँठीलाई कुनै न कुनै चाहीँले ज्वाईं बनेर थिलोथिलो पारेर चिकिहाल्छ क्यारे ? धेरै पनि भयो त तरुनीको पुती चिक्न नपाको… एकपटक छोरीकै उमेरकी तरुनी भोग्न पाए कति रमाईलो हुन्थ्यो होला ?” “
छ्या ! बुढा ! छोरीको नाम लिएर के के सम्म सोच्न सक्या ? म भईन भने त तिमीले त छोरीलाई पनि चिक्छौ क्यारे !” “के हुन्छ र ? छोरीको पुतीमा चिक्न हुँदैन भनेर काँडेतार लगाएको छैन क्यार ? मेरो लागि पो छोरी त यो लाँडोको लागि पुती त सबै एकै हो नि ? साधनाले मानेदेखि त चिक्दिन्छु जाँठीलाई छोरी न मोरी !” “थुक्क बुढा ! मलाई त संकै लाईसक्यो कतै छोरीलाई साँच्चैकै चिक्दियौ भने त बरबादै हुन्छ ? अनि कति चिक्न सकेको थकाई लागिसक्यो मलाई त छिटो गर !” “लौ हेर छोरीको नाम लिएर तलाईं चिक्दा त मेरो लाँडोको यो हालत छ… छोरीकै पुतीमा चिके भने त मजाले थेग्ने रहेछ यो लाँडोले !” साधना बाहिर ढोकाको छेउमा आइसकेकी थिई र ठूलीआमाको नजर ठ्याक्कै साधना माथि पर्*यो । निकैबेरसम्म ठूलीआमा र साधना दिदीको आँखा एकापसमा साक्षात्कार भयो र अचानकै ठूलीआमाले सिरकलाई तानेर आफूहरुलाई ढाक्नु भयो र ठूलाबालाई झकझकाउँदै सउतीको स्वरमा भन्नुभयो “ए बुढा ! मैले त भनेकै हो नि बाहिर ढोकामा साधना उभिएर हामीलाई हेरिरहेकी छे !” “ह्या तँ पनि ! थाहा नपाएझैं गर् न ?” अनि सिरक फालेर झनै तिब्र गतीमा ठूलीआमालाई चिक्न थाल्नुभयो र छिनमै ठूलाबाले ठूलीआमाको पुतीबाट लाँडो निकालेर ठूलीआमाको छातीमाथि चढ्नुभयो र लाँडोलाई छोल्दै फुसी झार्ने प्रयास थाल्नुभयो । छिनमै ठूलाबाको लाँडोले ठूलीआमाको अनुहारभरी फुसीको पिचकारी छोड्न थाल्यो र ह्वालह्वालती फुसी झरेको देखेर ठूलीआमाले ठूलै स्वर निकालेर भन्नुभयो “आमै कति झार्न सकेको !” ठूलाबाले पनि साधना सुन्ने गरि नै भन्नुभयो “लौ देखिस् छोरीको नाम लिएर तलाईं चिक्दा कति मजा आयो अनि माल पनि त्यति नै झर्*यो !” साधना दिदी त्यहाँबाट मुस्काउँदै हिंड्नुभयो, ठूलीआमाले अनुहारको फुसी पुछ्दै भन्नुभयो “छोरीले देखि पनि सुनि पनि ! अब कसरी मुख देखाउनु मैले !” “तँलाई त्यति पनि थाहा छैन ? लाज त उसलाई पो लाग्नुपर्ने बुढा-बुढीको कोठामा के हुन्छ भनेर हुर्के-बढेका केटाकेटी जसलाई पनि थाहा हुन्छ नि ? त्यति थाहा हुँदा हुँदै पनि हेर्छे भने त्यसको पुती चिलाएकै त हो नि !” “तरुनी छोरीको नाम लिएर त म बुढीलाई मर्नेगरि चिकेर जे भा’को माल झार्*यौ भनेपछी तरुनी नै चिक्न पायो भने के गर्थ्यौ होला ?” “त्यो त अब तरुनीकै पुतीमा चिकेर बिचार गर्नुपर्छ… तर जे भएपनि मजा चाहीँ औधि आयो है आज !” ठूलीआमा बेडबाट उठेर नाङ्गैनै ढोकासम्म आउनुभयो र ढोका ढप्काउँदै भन्नुभयो “मलाई चाहीँ तिमी बुढाको नियतमाथि निकै शंका लागिरहेको छ है ! कतै आफ्नै छोरीलाई विस्तरामुनि सुताउँछौ कि जस्तो लाग्यो है !” “तेरो बिचार के छ नि ? तैले केहि नभन्ने भए त म साधनालाई कान्छी बनाएर यही विस्तारामा सुताई हाल्छु ।“ ठूलीआमाले ठूलाबालाई हल्कासँग प्याट्ट पार्दै भन्नुभयो “भयो अब ! सकियो यस्ता कुरा चिक्ने बेलामा रमाईलो गर्नका लागि मात्रै ठिक छ ? छोरीमाथि आँखा लगाउनु हुन्न !”
ठूलाबाले पनि ठूलीआमालाई अँगाल्दै भन्नुभयो “तँ पनि घरमा बस्दा अलि सेक्सी भएर बस् न त ?” “अँ अब तेत्ती काम बाँकी छ नि म बुढीको ! बुढेसकालमा दुनियाको लाँडो ठन्काएर हिँड्नु !” “तँलाई कसले बाहिर जाँदा लगाई भनेको छ र घर बस्दा लगाई पो भनेको ?” अनि ठूलाबाले दराजबाट एउटा लिङ्गरी सेट निकालेर दिदै भन्नुभयो “यो लगाई त भित्री !” “भित्री त जे लगाए पनि के भो त ?” “तेसमाथि यो लेगिन्स र टि-शर्ट लगाई न त ?” “यी बुढाले मलाई बुढेसकालमा तरुनी बनाउने भए ! लौ जे भन्नुस् बुढाले भनेको नमाने कसले भनेको मान्नु र ?” अनि ठूलीआमाले ठूलाबाले भनेझैं कपडा लगाएर ढोका खोलेर बाहिर निस्कनुभयो । केहिबेरमै ठूलीआमाले चिया पकाएर ल्याउनुभयो र ठूलाबालाई दिदैं भन्नुभयो “हेर न यी बुढालाई के भा’को हो ? अहिलेसम्म नाङ्गै हुनुहुन्छ त ? खुरुक्क कपडा लगाएर चिया पिउनु !” अनि चिया टेबुलमा राखेर बाहिर निस्कनुभयो र साधना दिदीको कोठामा छिर्नुभयो “लाउ छोरी चिया पिउ !” ठूलीआमाले दिदीलाई राम्रोसँग पनि नहेरीकन चिया दिदीको टेबुलमा राखेर बाहिर निस्कनुभयो र भान्सामा पुगेर तरकारी केलाउन सुरु गर्नु भयो । साधना दिदी हिजो साँझकै लुगा लगाएर चियाको कप समातेर भान्सामा पुगि । ठूलीआमा दिदीतिर हेर्दै नहेरी आफ्नो काममा मस्त भएको देखेपछी साधना दिदीले कुरा गर्ने बहाना खोज्न थाल्नुभयो र आमाको चिया सेलाउन लागेको देखेपछी भन्नुभयो “मामु ! हजुरको चिया सेलाउन आँट्यो !” ठूलीआमाले “हुँ !” मात्रै भनेर चिया पिउनुभयो, साधना दिदीले आमासँग जिस्कने निधो गर्दै भनि “अनि हजुरलाई थकाई लाग्या छैन त ?” आमाले बुझ पचाउँदै भन्नुभयो “दबाई खाएर रातभरी सुतेपछी थकान त सकिहाल्यो नि छोरी !” “ह्या मामु पनि ! मलाई अनाडी नसम्झिनुस् न भन्या ! बिहानभरी बुबाले त्यत्रो सेक्सरसाईज गराउनु भा’छ ! जानुस् आराम गर्न म बनाईहाल्छु नि खाना !” “छ्या ! के नचाहिने नचाहिने बोल्या छोरी !” साधना दिदीले ठूलीआमाको पछाडीबाट अँगालेर भनि “मामु पनि ! लोग्ने-स्वास्नीको बिचमा सेक्स भनेको त सामान्य कुरा हो नि ? म त्यस्तो नजान्ने अनाडी पनि छैन नि ? कोठाभित्र बुढा-बुढीले के गर्छन् भन्ने पनि थाहा नहोला त उमेर पुगेको मान्छेलाई !” ठूलीआमा नचाहि-नचाहि संवादमा आउन थाल्नुभएको थियो “छि छोरी ! अब तिमी पनि के कुरा कोट्याउन थालेकी बुढी भईसकेकी आमासँग !” साधना दिदीले आमाको कानमा तातो सास फुक्दै भनि “के बुढी भएँ भन्नुहुन्छ ! भर्खर त सैतिस-अठ्तिस् बर्ष त लाग्नुभयो आजकालका आईमाई मान्छेले साठी वर्षको उमेरमा बिहे गरेर बच्चा पाउँछन् !” अनि ठूलीआमाको बुब्समा हात लगेर समाउँदै भन्नुभयो “हजुरको बुब्स त मेरै जत्रो त छ नि ! यहि कपडामा हामी बाहिर निस्क्यौं भने त हामीलाई दिदी-बहिनी भन्छन् होला !” ठूलीआमाले साधना दिदीको हात बुब्सबाट हटाउँदै भन्नुभयो “नछिल्ली न छोरी ! (अनि मसिनो स्वरमा) बाउ-छोरी नै उस्तै !” साधना दिदीले पनि आमाको पछिल्लो मधुरो शब्दलाई च्याप्प पकडेर भनि “के भन्नुभो मामु ! बाउ-छोरी नै उस्तै रे ? के गर्नुभो र बुबाले !” ठूलीआमाले आफूलाई साधना दिदीसँग छुटाउँदै भन्नुभयो “मलाई काम गर्न देउ न !” त्यही बेलामा ठूलाबा भान्सामा छिर्दै भन्नुभो “म तल पनौतीसम्म पुगेर आउँछु है ! त्यहाँ जग्गा हेर्नका लागि मान्छेहरु आ’का छन् रे ! खाना खान आउन ढिला हुनसक्छ उस्तै परे बेलुका मात्र फर्किन्छु कि ?” ठूलाबाले जग्गा दलालीको काम गरेर नै टन्न सम्पत्ति जोड्नुभएको थियो, हैसियत गाडी चढ्ने नै भएपनि मोटरसाईकल चढेर नै हिँड्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो “भोली कारोबारमा मन्दी लाग्यो भने कसले पाल्दिन्छ अनि कसले हाल्दिन्छ र गाडीमा पेट्रोल !” कुरो त ठिकै थियो, ठूलाबा निस्केपछि साधना दिदीले ठूलीआमालाई मजाले जिस्काउने बिचार गर्दै फेरी ठूलीआमालाई अँगाल्दै भनि “बिहान बिहानै हजुरहरुको रोमान्स देखेर मलाई त कस्तो खपीनसक्नु भा’थ्यो !” “छ्या ! यो छोरी पनि !” “ह्या मामु पनि अब म कसलाई भन्न जाउँ के मनका कुरा ?” “अरु कुरा गर न त ? खाली त्यही नचाहिने कुरा गर्छेउ त ?” “आँ… मामु ! अनि बुबाले कति धेरै झार्नुभएको तपाईंको अअनुहारमा… पुरै सेतै हुनेगरि… ! खुब मजा भयो होला है ! लाज नमानी भन्नु न ? अब त मेरो पनि त्यस्तै रोमान्स गर्ने बेला भयो नि मैले पनि जानिराख्नु पर्*यो नि ?” “छि छोरी ! अब मजा नहुने भए त कसले गर्छ र त्यस्तो… अनि अब तिम्रो बिहे भएपछी सबै कुरा त थाहा पाईहाल्छौ नि ?” “नाई मामु बिहे त अहिले नै गर्दिन के म त ? मास्टर सकेर एउटा राम्रो जागिर खाएपछी मात्रै गर्ने हो बिहे त ? बरु अलि अलि रोमान्स गर्न पाए कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनुभव गर्न मन छ…“ “हुँदैन छोरी ! बिहे नगरि त सेक्सका कुरा गर्न… कसैले थाहा पायो भने ?”
“मामु पनि मेरा सबै साथी ब्वाईफ्रेण्डसँग यस्तो गरें उस्तो गरें भनेर कुरा सुनाउँछन्… अब आफ्नो त ब्वाईफ्रेण्ड पनि छैन ! फेरी केटाहरुले मैले फलानीलाई यस्तो गरें उस्तो गरें भनेर कुरा गरेको सुनेर मलाई त लाज लागेर आयो… एउटासँग गर्*यो भने सबैलाई थाहा हुँदो रहेछ… अलि गोप्य नै राख्न पाए पो ! फेरी केटाहरु कस्को माल ठूलो र कस्को माल टाईट अनि कस्को बुब्स ठूलो र कसको पुसी टाईट भनेर कुरा पनि गर्दारहेछन् । बरु भन्नु न बुबाको माल कत्रो छ ?” साधनाले ठूलीआमाको बुब्स मजाले नै मसल्न थालिसकेकी थिई र ठूलीआमा हल्का उत्तेजनामा आइसक्नुभएको थियो । ठूलीआमा उत्तेजनामा आएको महसुस भएपछी साधना दिदीले आफ्नो एउटा हातलाई ठूलीआमाको लेगिन्सबाट भित्र छिराएर सिधै पुतीमा दल्न सुरु गर्नुभयो र फेरी सोध्नुभयो “एकचोटी भन्नु न आमा बुबाको लाँडो कत्रो छ !” जोशको सुरमा ठूलीआमाले पनि भन्नुभयो “ब्यानभरी तेराबाले मलाई चिकेको हेर्दा देखिनस् कत्रो थियो ?” “राम्रोसँग देखिन के मामु ?” ठूलीआमाले सित्कार भर्दै साधना दिदीलाई भन्नुभयो “यस्तो लाग्दैछ कि तँ आफ्नै बाउको लाँडोले चिकाउनका लागि आतुर छेस् ! तेरो कपडा लगाई देखेर तेरो बाउ पनि तेरो जवानीमाथि र्*याल काढिरहेका छन् ।” साधना दिदी उत्साहित भएझैं गरि ठूलीआमालाई भन्नुभयो “हो र मामु ! मेरो जवानी देखेर बुबाको लाँडो तिर्खाएकै हो त ?” “खै मलाई त त्यस्तै लाग्दैछ ? नत्र बिहान बिहानै तेति धेरै फुसी झारेर मलाई नुहाईदिए त बुढाले… फेरी बुढाले मलाई नै नचिकेको कति समय भैसकेको थियो !” “लौ मामु तेसोभए मेरो समस्याको समाधान पनि होला जस्तो छ घरमै बुबाको लाँडोले चिकाउन पाए भने बाहिरकाले पनि थाहा नपाउने ! ईज्जत पनि जोगिने तिर्खा पनि मेटिने !” ठूलीआमाले सहजै भन्नुभयो “कस्ता लाज पचेका बाउ-छोरी ! एउटा छोरीको नाम लिएर ब्यानभरी मलाई चिक्ने अर्की बाउको नाम लिएर अहिले मलाई सन्काउँदै छे ! जे सुकै गरो तिमर्का बाउ-छोरी !” “मामु ! लौ न बरु बुबालाई मैले कसरी फकाउँ सिकाउनु न ?”
bhagyamani choro lucky son nepali sex story, lucky son nepali sex story, lucky son nepali story, nepali sex story